Rafael Marquez Oo Shaaciyey Waqtiga Uu Kusoo Laabanayo Barcelona Iyo Shaqada Uu Ka Qabanayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRafael Marquez Oo Shaaciyey Waqtiga Uu Kusoo Laabanayo Barcelona Iyo Shaqada Uu Ka Qabanayo
Rafael Marquez Oo Shaaciyey Waqtiga Uu Kusoo Laabanayo Barcelona Iyo Shaqada Uu Ka Qabanayo
April 24, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Halyeygii difaaca xulka qaranka Mexico ee Rafael Marquez ayaa shaaciyey waqtiga uu kusoo laabanayo kooxdiisii hore ee Barcelona, taas oo uu ka qaban doono shaqo tababarenimo oo ciyaartoyda kulliyadda La Masia ah.
Rafael Marquez oo muddo toddoba sannadood ah u ciyaaray Barcelona, guulo badanna la gaadhay ayaa xidhiidh dhow oo saaxiibtinimo la leh madaxweynaha cusub ee dhowaanta dib loosoo doortay ee Joan Laporta, kaas oo ku qanciyey in uu kusoo laabto Barcelona oo uu noqdao tababaraha da’yarta.
Marquez oo dhowaan ay soo baxday warqadda magacaabistiisa ee tababaraha da’yarta Barca, ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta, waxaanu ka sheekeeyey waqtiga uu kooxdiisa hore kusoo laabanayo ee uu qabanayo shaqada loo magacaabay iyo xidhiidhka ka dhexeeya Joan Laporta.
Isagoo u warramayay warbaahinta TUDN, waxa uu Marquez yidhi: “Xidhiidh saaxiibtinimo oo fiican ayaan la leeyahay Joan Laporta. Sababta aan u taageeray ololihiisii madaxtinimaduna waxay ahayd saaxiibtinimada wanaagsan ee naga dhaxaysa.
“Aniga way i aaminsan yihiin, waxaanan kusoo laabanayaa iyadoo uu halkaas jiro xidhiidh saaxiibtinimo oo wanaagsan. Kaddib markii uu ku guuleystay doorashada Barcelona waxa uu iisoo diray dalab ah in aan kuliyadda tababare ka noqdo.
“Kaliya waxa aan hadda Mexico u joogaa in aan soo dhamaysto hawl shaqsi ah ka hor inta aanan ku laabanin Spain.”
Rafael Marquez waxa uu qirtay in aanu haysanin liiskanka tababarenimo ee qaaradda Yurub, waxaanu yidhi: “Wali ma haysto liiska tababarenimo ee UEFA. Waxaan u baahanahay sannad aan ku dhamaystiro, martiqaadka ay iisoo direenna waa in ay isiiyeen fursad ay igaga caawinayaan in is-horumariyo iyo in albaabada ay ii furtay mid ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan iyo akaademiyada ugu fiican.”
Ugu dambayntii waxa uu Rafael Marquez shaaciyey waqtiga uu imanayo Barcelona, waxaanu yidhi: “Waxa aan halkaas tegi doonaa July ama August oo aan ka mid noqon doono Barcelona.”